Thailand : Miezaka Maka Ny Fon’ny Olona Amin’ny Fandefasana Malalaka Ny Fiadiana Ny Amboara Erantany Amin’ny TV Ny Mpanongam-Panjakana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2014 7:59 GMT
Miomana ny handefa mivantana ireo lalao 64 amin'ny fiadiana ny amboara erantany amin'ny tobinà TV malalaka any Thailandy ny fitondrana mpanongam-panjakana noho ny fanekeny “hamerina ny fahasambarana ho an'ny vahoaka”.
Nisy fikarakarana fetiben'ny ‘hasambarana’ izay ahazoana fanapaham-bolo maimaimpoana, sakafo maimaim-poana, fanorana maimaim-poana ary fizaham-pahasalamana maimaim-poana nanerana ny firenena hatramin'ny herinandro lasa. Nampifalifalian'ny tafika teo amin'ny toerana mahazatra fanaovany hetsi-panoherana ny vahoaka.
Ny fifehezana ny TV sy ny fanomezana vahana ny fanambarana ara-miaramila ary ny hira fitiava-tanindrazana tamin'ny fotoanan'ny Ady Mangatsika no natao haingana tamin'ny fotoana nanaovana ny fanonganam-panjakana tamin'ny 22 May 2014. Hatreo dia nohalefahany ny fameperana ny fandaharana sasany ao amin'ny TV izany saingy mbola araha-maso fatratra kosa ireo haino aman-jery fihainom-bahoaka.
Nambaran'ireo mpanongam-panjakana ihany koa ny fandefasana maimaim-poana ny “The Legend of King Naresuan”, sarimihetsika momba ilay mpitarika hajaina izay niaro sy nanitatra ny fanjakana Thai. Nahemotra ny fampakarana ny saram-pitateran'ny fiarandalamby mba hahasambatra ny olona.
Teny am-piandohana, nikabary ho fiarovana ny fanonganam-panjakana sy nianiana ny ‘ hiverenan'ny hasambaran'ny vahoaka’ ny Lehiben'ny tafika, Prayuth Chan-ocha :
Nanangana foibe maro ho fampihavanana ny governemanta hanafoanana ny disadisa misy eo amin'ireo hery politika mpifanandrina.
Mialohan'ny fandefasana maimaim-poana ny lalao fiadiana ny amboara eran-tany, nomen'ny mpanongam-panjakana baiko ny TV mba handefa ny hira “Return happiness to the people” ( avereno amin'ny vahoaka ny hasambarana), nosoratanà jeneraly ao amin'ny tafika. Adin'ny iray monja no voalaza ho nanoratana ny tonon'ilay hira ary ahitana taratra ny hafatry ny tafika ho an'ny vahoaka. Ity ambany ity ny dika tsy ofisialin'ny ampahany amin'ilay hira :
Angatahan'ny Jeneraly Prayuth ihany koa ny mpanohitra ny fanonganam-panjakana hanangana ny rantsany dimy fa tsy ny fiarahabana rantsana telon'ny ‘Hunger Games :
Manao ny mariky ny ‘ Tiako ianao’ ny Jeneraly sefon'ny NCPO, Prayuth, talohan'ny handaozany ny Klioban'ny tafika Thai, avy amin'i @duangtip_TPBS pic.twitter.com/eYnAnzjDxY
Miaramila anaty BTS manara-maso mitily akaiky ireo mpanao fihetsiketsehana mavitrika #thaicoup pic.twitter.com/68hiq29e5t
Fa nitafatafa tamin'ny sasany tamin'ireo voasambotry ny tafika i Prachatai ary nizara ny zavatra mafy niainany :
Averimberin'ny governemanta ny fampitandremana ireo mpikirakira ny aterineto mba tsy hitsikera ny tafika sy ny fitondran'ny mpanongam-panjakana. Nefa hatramin'izao dia mbola tsy vitan'ny tafika ihany ny manakana ny Thais tsy hizara ireo vaovao mitsikera, ary hatramin'ireo fanambarana fanoherana aza. Vao haingana teo izao dia norahonan'ny manamboninahitry ny mpitandro filaminana ho enjehana, samborina, ary helohina ho manitsakitsaka ny lalàna ireo mpanohitra miserasera amin'ny aterineto .
Ankoatra izay nohamarininà orinasa iray any Norvezy fa notapahany nandritra ny adiny iray ny Facebook tany Thailandy ny 28 May taorian'ny fangatahana nataon'ny manampahefana Thai. Nanohitra ny fanazavana nomen'ny governemanta io, hoe vokatry ny olana kely ara-teknika iny fahatapahana iny. Navoakan'ny vondrona Telenor any Norvezy sy naparitany tamin'ny The Next Web ity fanambarana ity :
Zava-misy ny hoe hatramin'ny fanonganam-panjakana tany #Thailand, voaaro kokoa ny mpizaha tany noho ny tany aloha. Tsy misy intsony ny poa-basy isan'andro, ny fanapoahana baomba, ny hetsi-bahoaka